တစ်ခုကအင်တာနက် Freelance အမျှဆက်ခံအတွက်အလွန်အရေးပါအကြောင်းသိကောင်းစရာများ
အားဖြင့် Posted: Bhose September 10, 2013
အကွောငျး 75% လွတ်လပ်သောအလွတ်အဖြစ်ပိုက်ဆံအွန်လိုင်းလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကိုင်ရာတွင်လူမျိုး၏, သူတို့ကအားဖြင့်အိမ်ကနေ telecommute ဒါမှမဟုတ်အချို့သောအွန်လိုင်းကုမ္ပဏီမှတဆင့်တာဝန်ကျရာပေးဆောင်ဆဲမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အရည်အချင်းများကိုအညီအလုပ်လုပ်ရ. အင်တာနက်ကိုအခြားနိုင်ငံများတွင်စျေးပေါလုပ်သားများမှတွေဆီလွှဲပေးလိုက်ရသလိုခံရဖို့အလုပ်အကိုင်ဝန်အဘို့နှင့်သူတို့ကိုအွန်လိုင်းငွေပေးချေမှုလုပ်ငန်းစဉ်အတွက်ရွေးစရာမှတဆင့်ပေးဆောင်နိုင်ရန်အတွက်အလွန်ဖြစ်နိုင်ခြေဖန်ဆင်းတော်မူပြီ. အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိကုမ္ပဏီအများစုသည်အိန္ဒိယနှင့်အခြားနိုင်ငံများတွင်လူပုဂ္ဂိုလ်များမှ၎င်းတို့၏အလုပ်အကိုင်အများစုကိုအနေနဲ့ Outsourcing အားဖြင့် overhead အပေါ်ခုတ်လှဲနေကြတယ်, နှင့် PayPal ကဒါမှမဟုတ်တချို့အခြားအင်တာနက်ငွေပေးချေမှုစနစ်များကိုတဆင့်သူတို့ကိုပေးဆောင်ရ. အလုပ်-at-နေအိမ် mums ကျောင်းသားများနှင့်အခြားအလွတ်မှာကိုပစ်မှတ်ထားနေကြသည်မှာအမေရိကန်အများစုကအမျိုးသမီးတွေလည်းအစာရှောင်ခြင်းအလုပ်-at-နေအိမ် mums ဖြစ်လာကြပြီနှင့်များစွာသောအွန်လိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုတက်လာကြပြီ. သင့်ရဲ့အင်တာနက်ချိတ်ဆက်ကွန်ပျူတာကနေတဆင့်သင့်ရဲ့အိမ်ကနေတိုက်ရိုက်အလိုရှိသလောက်သို့မဟုတ်အဖြစ်အနည်းငယ်သာအလုပ်လုပ်ကိုင်လျှင်သင်သည်ထိုကြောင့်အလွတ်ရှိတယ်, နှင့်စအွန်လိုင်းငွေပေးချေမှု processor ​​ကိုနည်းလမ်းများကိုမှတဆင့်ပေးဆောင်ရ. သို့ဖြစ်လျှင်အဘယ်သို့အလုပ်-at-နေအိမ်အလွတ်အတိုင်းသင်တို့အောင်မြင်မှုအတွက်အထောက်အကူမှအချို့အရေးကြီးသောအချက်?
ကိုယ့်. သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်တန်ဖိုးရှိရှိနာရီ Set: သင်သည်သင်၏အိမ်ရဲ့စည်းစိမ်ထဲကနေအလုပ်လုပ်ဖို့နေစဉ်ကိုသင်နားလည်သဘောပေါက်ရပါမည်, သင်သည်ဧည့်သည်များအားဖြင့်နှောင့်အယှက်မဖြစ်လိုခြင်းသို့မဟုတ်အပြက်အချော်နှင့်ရုပ်မြင်သံကြားတို့ကသိမ်းသွားရသောအခါအကျိုးဖြစ်ထွန်းသောနာရီသတ်မှတ်ထားဖို့သင့်လျော်ပါလိမ့်မယ်. သင်ပုံမှန်ရုံးရှိကြ၏လျှင်သကဲ့သို့သင်တို့ အကယ်. သင်၏အလုပ်ရင်ဆိုင်ရမည်သည့်အတွက်ဆိတ်ကွယ်ရာအချို့တန်ဖိုးရှိရှိနာရီသတ်မှတ်ရပါမည်, သင်သည်သင်၏ထားဝင်ငွေကိုရောက်တဲ့ကြောင့်သင်တို့သည်လည်းဤနာရီသွားရောက်ကြည့်ရှုရန်မသင့်ဧည့်သည်များအားပြောစေခြင်းငှါ,.
ii. တစ်ဦးအထောက်အကူပတ်ဝန်းကျင်များတွင်အလုပ်: အလုပ်-at-နေအိမ်အလွတ်အဖြစ်, သင့်ရဲ့အလုပ်ဆောင်းပါးအရေးအသားဖြစ်စေခြင်းငှါ,, VA သို့, Call Center, အခြားသူများအကြား transcriptionist နှင့်အွန်လိုင်းနည်းပြဆရာ. သင်တို့သည်သင်တို့၏သားသမီးတစ်ဦးသာမန်ဖြစ်မယ့်နေရာနှင့်သင်အမှားအယွင်းမဆိုအစွန်းမရှိဘဲသင်၏အလုပ်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်နိုင်သည့်နေရာတွင်တစ်ဦးအထောက်အကူပတ်ဝန်းကျင်လိုအပ်ပါတယ်. မျဉ်း၏အခြားအဆုံးမှာကို virtual လက်ထောက်သို့မဟုတ် Call Center နှင့်ဖောက်သည်အဖြစ်အဝေးဆက်သွယ်မှုကိုမြင်ယောင်ကြည့်ပါသင့်ရဲ့ငိုကြွေးခြင်းကလေးများနှင့်တီဗွီ blaring ကိုကြား, မော်တော်ယာဉ်၏သို့မဟုတ်ပင်ဆူညံသံ. အများအပြားအလုပ်-at-အိမ်အလွတ်ကိုသတိရပါလစဉ်လစာဝင်ငွေရှာထက်ပိုစာရေးဝင်ငွေ.
iii. သင်ဝါးနိုင်သည်ထက်ပိုမိုမကိုက်ပါနဲ့: သင်အပေါ်နေပါတယ်အကျင့်ကိုကျင့်၏ volumes ကိုခန့်စောင့်ရှောက်မှုမခံမယူကြဘူးဆိုရင်ဒါဟာအလုပ်နှင့်အတူကိုယ့်ကိုယ်ကို Overload မှဖြစ်နိုင်. သင်သည်ကိုယ်ကိုအလွှမ်းမိုးနိုင်နှင့်စိတ်ဖိစီးမှုသင်တို့အပေါ်မှာအကောက်ကိုယူစတင်သည်တဲ့အခါသင့်ရဲ့အလုပ်ရဲ့အရည်အသွေးကဆင်းရဲခံရနိုင်. သင့်ဦးနှောက်ကို Over-လုပ်အားမှပိတ်ပစ်သလိုကြောင့်သင့် web content တွေကိုအရေးအသားအလုပ်အတွက် typographical နှင့်သဒ္ဒါအမှားများကိုရရှိခြင်းကိုမြင်ယောင်ကြည့်ပါ. အွန်လိုင်းအလုပ်အကိုင်များနှစ်သစ်ကူးပွဲတော်နှင့်မြင့်မားသောတောင်းဆိုချက်များတွင်လာနိုင်ပေမဲ့လည်း, သင်ရပါမည်သူတို့ရဲ့အရည်အသွေးအဆင်းရဲခံရတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်ခြင်းမရှိဘဲသင့်သာဖြည့်သေချာအလုပ်အကိုင်များကိုလက်ခံ, နှင့်သင်တကယ်တော့၌သင်တို့ကိုသိပ်အလုပ်အတူဆင်း bogged နှင့်အချိန်သတ်မှတ်ပေးလိုက်ခရီးဦးကြိုပြုခြင်းကိုရောက်တဲ့ကြသောအခါအနေနဲ့ Outsourcing စဉ်းစားစေခြင်းငှါ,.
iv. ကောင်းစာရင်းအင်းအကောင့်အသစ်များ၏ Keep: သင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင်အတွင်းနေထိုင်သူဖြစ်တယ်ဆိုရင်, သင့်ထက်ပိုဝင်ငွေရလျှင်သင် IRS ကိုအခွန်မပေးဆောင်ရမယ်လို့မမေ့မလြော့ပါ $600 မဆိုအပ်ပေးတော်မူတစ်နှစ်တွင်တစ်ဦးအလွတ်အဖြစ်, နှင့်လည်းသင်အိမ်ကနေအလုပ်လုပ်ကြသော်လည်းအချို့အသေးအဖွဲ overhead ထေမိဖို့လိုပါလိမ့်မယ်. သင့်ရဲ့ဝင်ငွေကောင်းအကောင့်အသစ်များ၏ Keeping, အွန်လိုင်းအလုပ်အကိုင်များသတင်းရပ်ကွက်များ, အလုပ်အကိုင်အသတ်မှတ်ချိန်, နှင့်သင်၏အလုပ်သက်ဆိုင်ရာအခြားအရေးကြီးတဲ့ tabs ကိုသင်စာအုပ်တွေထဲကနေပဲအချိန်တိုအတွင်းမှာခေတ်မီထဲကသင့်ရဲ့ဘဏ္ဍာရေးအနေအထားဆုံးဖြတ်ရန်နိုင်သောနေရာတွင်နေရာလို.
v. အွန်လိုင်းဝင်ငွေများစွာသတင်းရပ်ကွက်များ: သင်အွန်လိုင်းတစ်ဦးအလွတ်အဖြစ်အလုပ်လုပ်ကိုင်သည့်အခါ, သင်မကြာခဏသာမန်ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းများမှ accruable လုံခြုံရေးအကျိုးခံစားခွင့်များအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မဟုတ်. ဆေးဝါးအတွက်အအရည်အချင်းပြည့်မဟုတ် အာမခံ, 401ဋအကျိုးကျေးဇူးများ, အခြားသူများအကြားနှင့်အခြားအလုပ်စရိတ်; တစုံတယောက်သောသူသည် client သို့မဟုတ်အရင်းအမြစ်ရုတ်တရက်သွေ့ခြောက်စေတတ်လျှင်သင်ထို့ကြောင့်ဒါကြောင့်သင်အွန်လိုင်းဝင်ငွေများစွာကိုသတင်းရင်းမြစ်ရယူကြောင်းသေချာစေရန်ရမယ်, သင်ဆဲမနက်ဖြန်အတွက်ချွေတာနေစဉ်တွင်မည်သည့်ပစ်မှတ်ခံစားနေရမပါဘဲတခြားသူတွေနဲ့အတူရနိုင်.
မှတ်ချက်ပေးရန်ကိုပထမဦးဆုံးဖြစ် အပေါ် "တစ်ခုကအင်တာနက် Freelance အမျှဆက်ခံအတွက်အလွန်အရေးပါအကြောင်းသိကောင်းစရာများ"